Minisitra: Ny Alemanina rehetra dia hatao vaksiny, sitrana na maty
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Minisitra: Ny Alemanina rehetra dia hatao vaksiny, sitrana na maty
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny minisitry ny fahasalamana any Alemaina Jens Spah
Araka ny nambaran’ny minisitra, dia hatao tsimatimanota na ho lavon’ny valan’aretina coronavirus ny rehetra eto amin’ny firenena ato anatin’ny volana vitsivitsy.
Ny minisitry ny fahasalamana any Alemaina Jens Spahn, androany, dia nanentana ny rehetra hanao vaksiny, saingy nisalasala momba ny fanerena ny tifitra. Nilaza ny minisitra fa ho tratra ny tsimatimanota omby, ary "tsy misy vaksiny an-tery hanapaka ity onjan'ny" areti-mifindra ity.
"Angamba amin'ny fiafaran'ity ririnina ity, araka ny lazaina indraindray, dia betsaka ny olona rehetra any Alemaina no hatao vaksiny, sitrana na maty," hoy i Spahn.
Spahn dia nanao ny fanehoan-keviny tamin'ny maha mpanao politika malaza sasany, anisan'izany ireo avy amin'ny Chancellor Angela Merkel. Christian Democratic Union (CDU), dia niantso ny handidy ny vaksiny ho an'ny olom-pirenena rehetra ao anatin'ny firongatry ny otrikaretina COVID-19.
Ny minisitry ny Bavaria Markus Soeder Nilaza ny zoma teo fa ny tahan'ny fihanaky ny aretina naharitra fito andro dia "nitifitra teo an-tampon'ny tafo" teo amin'ireo tsy voan'ny vaksiny.
"Mino aho fa amin'ny farany dia tsy hihoatra ny adidy amin'ny vaksiny ankapobeny isika," hoy izy.
Ny hevitra mitovy amin'izany dia nampiasaina vao haingana, mpitarika eoropeanina iray hafa, ny praiminisitra Hongroà Viktor Orban. Raha niresaka tamin'ny radio Kossuth tamin'ny zoma izy, dia nanaratsy ny anti-vaxxers izy, nilaza azy ireo ho fandrahonana ary nilaza fa "ho fantatr'izy ireo fa hatao vaksiny izy ireo na ho faty."
Will MacPheat hoy:
November 22, 2021 amin'ny 18: 02
1. Ny "vaccinations" dia tsy manome anao hery fiarovana ary toa maharitra 6 volana fotsiny.
2. Tranga efa fanta-daza talohan'ny covid-19 ary ekena fa mitranga miaraka amin'ny vaksinin'ny covid-19 fa ny vaksiny tsy manome hery fiarovana dia mampirisika ny viriosy hiova ho endrika mahery vaika kokoa.
3. Noho izany dia ny vaksiny no mahatonga ny areti-mifindra fa tsy ny tsy vita vaksiny.
4. Voamarina ihany koa ankehitriny fa ny fitazonana ny haavon'ny rà 50 nanograms isaky ny milliliter ny vitamin D dia saika hanafoana ny mety ho aretina mafy na fahafatesana amin'ny covid-19.
5. Tsy mbola fantatra ny voka-dratsin'ny vaksiny. Na izany aza, mazava ho azy fa ny olona dia maty tamin'izy ireo ary angamba mihoatra noho ny fantatsika ary ny olona dia mijaly noho ny tsy fahasalamana.
6. Mety ho azo ekena izany rehetra izany raha tsy misy safidy mora sy azo antoka.
Ity safidy ity dia vitamin D. Ny tokony hataon'ny haino aman-jery sy ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka dia manantitrantitra ny ilana ny rehetra hampiakatra ny haavon'ny vitamin D. Ary midika izany fa maka 4,000 ka hatramin'ny 10,000 IU isan'andro.